तौल घटाउने हो ? जान्नुहोस् 'फिटनेस एक्पर्ट' को टिप्स - Lokpath Lokpath
२०७७, ६ श्रावण मंगलवार १५:३०
प्रकाशित मिति : २०७७, ६ श्रावण मंगलवार १५:३०
काठमाडौं – तौल बढी भएकाहरुले बिहान उठ्ने वित्तिकै खाली पेटमा एक–डेढ गिलास पानी पिउनु एकदमै उत्तम मानिन्छ ।
यसो गर्नाले तौल घटाउन मद्दत गर्नुका साथै दिमागमा प्रर्याप्त उर्जा दिन्छ। जसका कारण दिनभर सक्रीय हुन सहयोग मिल्छ ।
चिया वा कफी खानुभन्दा अगाडि आधा वा एक गिलास पानी पिउनै पर्छ। यसले शरिमा एसिडको असर र वजनलाई नियन्त्रण गर्छ।
नास्ता गर्नु भन्दा करिब एक घण्टा अगाडि वा नास्ता गरेको एक घन्टा पछि १ गिलास पानी पिउने गर्नुपर्छ । यसले नास्ता पचाउन मद्दत गर्छ ।
बिहान वा बेलुका खाना खानुभन्दा भन्दा २० मिनेट पहिले १ गिलास पानी पिउने। यसले ओभर डाइटिङबाट बचाउँछ र तौल घटाउँछ।
सुत्नु भन्दा केही घन्टा पहिला एक गिलास पानी पिउने। यसरी पानी पिउदा खाना पछि केही खान मन लाग्दैन र बिहान उठ्दा शरिरमा रहेका हानिकार तत्व पानीसँगै बगेर जान्छन्।
बढ्दो तौल मानिसहरुको चिन्ताको विषय बन्ने गरेको छ । तौल घटाउने अनेक तरिका अपनाएता पनि धेरैले यसमा सफलता पाएका हुँदैनन् । स्वस्थ जीवनयापनका लागि मानिसहरुले आफ्नो तौल नियन्त्रणमा राख्न जरुरी छ । भारतीय फिटनेस एक्सपर्ट तौसिफ खानले तौल घटाउन चाहने व्यक्तिले सुत्न पहिले निम्न कार्य गर्नुपर्ने सुझाएका छन् ।
सुत्नु पहिले एक ग्लास दुध पिउनुहोस् । यसमा पाइने क्याल्सियम र प्रोटिनले पाचन शक्तिलाई राम्रो बनाउँछ । यसले राम्रो निन्द्रा लाग्न सहयोग गर्छ भने तौल पनि घटाउन सहयोग गर्दछ ।
रातीको खानामा कालो मरिचको प्रयोग गर्नुहोस् । यसमा बोसो पगाल्ने तत्व पाइनुका साथै यसले मेटाबोलिजम रेट पनि बढाउँछ जसले अतिरिक्त बोसो कम गर्न मद्दत गर्दछ ।
नियमित रुपमा सुत्नुभन्दा पहिले एक कचौरा कम फ्याट भएको दही खानुहोस् । यसमा पाइने प्रोटिनले ‘मसल्स बिल्ड’ गर्नेछ र तौल घटाउन सहयोग गर्नेछ ।
सुत्नुभन्दा आधा घण्टा पहिले २० देखि ३० मिनेट हिँड्नुहोस् । यसले खाना पचाउन सहयोग गर्दछ र तौल घटाउन मद्दत गर्दछ ।
५. ग्रिन टीः
यसमा एन्टीअक्सिडेन्ट र क्याटेचिन्स हुने भएका कारण यसले मेटाबोलिजमलाई बढाउन सहयोग गर्दछ भने पेटको बोसो कम हुन थाल्छ त्यसकारण सुत्नु पहिले ग्रिन टी पिउनुहोस् ।
६. कागती पानीः
यसले शरिरको टक्सिन टाढा राख्छ जसले बोसो बढाउन दिँदैन । यसले पेटमा जमेको बोसो कम हुन्छ ।
७. पाइनएप्पल र अदुवाको रसः
यी दुबैले मेटाबोलिजमलाई सन्तुलन राख्छ र बोसो पगाल्न मद्दत गर्दछ । यसमा भिटामिन सि हुन्छ जसका कारण शरिरले पूर्ण रुपमा शक्ति पाउँछ ।
८. एलोभेरा जुसः
यसले शरिरमा फ्रि र्याडिकल्सको वृद्धिलाई कम गर्दछ जसले पेटको बोसो कम हुन मद्दत गर्दछ ।
९. हरियो धनियाँको जूसः
यो पिउँदा शरिरको टक्सिन टाढा हुन्छ र पेटको बोसो चाँडै कम हुन्छ ।
१०. काँक्रोको जुसः
यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट र एन्टी इन्फ्लामेटरी गुण हुन्छ जसले पेटको बोसो हटाउन सहयोग गर्छ ।
मोटोपनले सतायो ? सजिलोसँग यसरी घटाउनुहोस् तौल
तपाईं तौल घटाउन चाहनु हुन्छ ? तौल घटाउन भनिएका बजारमा पाइने धेरैजसो उत्पादनमा केमिकलको प्रयोग गरिएको हुन्छ जसले तपाईंको शरिरलाई फाइदाभन्दा बढि बेफाइदा पुर्याएको हुन्छ । यस्तोमा तपाईं बढिरहेको बोसोलाई घटाउनका लागि प्राकृतिक तरिका अपनाउनु लाभदायक हुन्छ ।
४. ग्रीन टीः
७. ओमेगा थ्री :
तोफु, पालुङ्गो, चिज, ओखर, अण्डालगायतमा ओमेगा थ्री तत्व पाइन्छन् । यसले तपाईंको शरिरमा जमेको अतिरिक्त बोसोलाई हटाउन सहयोग गर्दछ ।